Inkulumo kaBarack Obama kwabase-Afrika - IFRIKHEPRI FOUNDATION
Lwesine 21 Novemba, 2019
Qaphela isikhumbuzo se-ACTe: i-Black Man ihamba
I-Afrika # Ubugqila # I-Colonization # I-Renaissance # Umlando # Umoya # I-paradigm entsha
yenhlobo ye Savant
Imfihlakalo yeSphinx enkulu (PDF)
Impi Yomhlaba Yomhlaba Engcolile (Ividiyo)
Izimfundiso zika-Master Omraam Mikhael Aivanhov (Amavidiyo)
Imiphumela yokucabanga nemizwa emanzini (Ividiyo)
Inkulumo kaBarack Obama kuma-Afrika
By I-AFRIKHEPRI FOUNDATION ngo-Agasti 30, 2019
UBarack Obama waya kuma-Afrika
Ngimi phambi kwakho njengomMelika oziqhenyayo. Ngimi phambi kwakho njengendodana yomuntu wase-Afrika. I-Afrika kanye nabantu bayo basizile ekwakheni iMelika futhi bayivumela ukuthi ibe yisizwe esikhulu esikhona. Futhi i-Afrika nabantu bakhona basizile ekwakheni ukuthi ngingubani nokuthi ngiwubona kanjani umhlaba. Emizaneni yaseKenya lapho kuzalwa khona ubaba, ngifunde kokhokho bami, kanye nempilo kagogo wami, amaphupho kababa wami, izibopho zomndeni ezisixhumanisa sonke singama-Afrika kanye nabaseMelika.
Njengabazali, mina noMichelle sifuna ukuqiniseka ukuthi amadodakazi ethu amabili ayalazi ifa lawo - iYurophu kanye ne-Afrika ngamandla abo wonke nasemzabalazweni wabo wonke. Ngakho-ke sathatha amadodakazi ethu futhi saba nawo ogwini lwaseNtshonalanga Afrika, emasangweni angabuyi, sazi ukuthi okhokho bawo babeyizigqila nabaninizigqila. Sabhuka nathi kule ngqamuzana elincane eRobben Island lapho uMadiba akhombisa umhlaba ukuthi noma ngabe ungumuntu onjani ngaphandle kwakhe, uyena kuphela inkosi yezwe lakhe. Kithina, ezinganeni zethu, i-Afrika kanye nabantu bakhona basifundisa isifundo esinamandla - sokuthi kumele sisekele isithunzi esikuwo wonke umuntu.
Isithunzi - lo mbono oyisisekelo wokuthi, ngenxa yobuntu bethu obujwayelekile, noma ngabe sivelaphi, sibukeka kanjani, sonke sizalwa silingana, sithintwe ngumusa kaNkulunkulu. Wonke umuntu unenani. Wonke umuntu ubaliwe. Wonke umuntu kufanele aphathwe ngenhlonipho nangehlonipho. Engxenyeni enhle yomlando, ubuntu abukubonanga lokho. Isithunzi sasibhekwa njengemfanelo ebekelwe labo abasezingeni eliphezulu nelungelo, amakhosi nabadala. Kwathatha ukuguqulwa komoya, phakathi namakhulu eminyaka, ukuvula amehlo ethu esithunzini somuntu ngamunye. Futhi emhlabeni wonke, izizukulwane ziye zalwela ukubeka lo mbono kwezomthetho nasezikhungweni.
Ngakho-ke, nalapha e-Afrika. Lokhu kungukuqala kwesintu, futhi imibuso yasendulo yase-Afrika ibiyikhaya lemitapo yolwazi emikhulu kanye nasemanyuvesi. Kepha ububi bokugqilazwa bususe hhayi nje phesheya, kepha lapha ezwenikazi lonke. Ubukoloniyali babhuntsha umnotho wase-Afrika futhi baphuca abantu amandla abo okubumba ikusasa labo. Ekugcineni, ukunyakaza kwenkululeko sekunyukile. Futhi kuneminyaka engu-50 eyedlule, ekuqhumeni okukhulu kokuzimisela, abantu base-Afrika bajabule ukuthi amafulegi angaphandle ehla futhi amafulegi akho esizwe anda.
Njengoba kusho u-Albert Luthuli waseNingizimu Afrika ngaleso sikhathi, isisekelo sokuthula nobumbano e-Afrika sibuyiselwa ngokuvuka kobukhosi bezwe kanye nenkululeko, ukulingana kanye nesithunzi indoda. Isigamu seminyaka kule nkathi yenkululeko, sekuyisikhathi sokuba sibeke eceleni izingcindezi ezindala ze-Afrika ezisamabhande ebuphofwini nasezingxabanweni. Umhlaba kumele uqaphele intuthuko emangalisayo yase-Afrika.
Namuhla, i-Afrika ingesinye sezifunda ezinamandla kakhulu emhlabeni. Isigaba esiphakathi se-Afrika kulindeleke ukuthi sikhule sibe ngaphezulu kwabathengi abangaphezu kwezigidi eziyinkulungwane. Ngamakhulu ezigidi zezingcingo ezingamaselula, ukufinyelela okufinyeleleka ku-inthanethi, ama-Afrika aqala ukugxuma ubuchwepheshe obudala ekuchumeni okusha. I-Afrika iyahamba, i-Afrika entsha iyavela. Ngokuqhutshwa yile nqubekela phambili, futhi ngokubambisana nezwe, i-Afrika yenze izinzuzo zomlando kwezempilo. Izinga lokutheleleka okusha kwe-HIV lehlile. Omama base-Afrika basethubeni lokusinda ekuzalweni futhi babe nezingane eziphilile. Ukufa ngenxa yomalaleveva kuncishisiwe, kusindisa izimpilo zezigidi zezingane zase-Afrika. Izigidi zisuswe ebuphofini obedlulele. I-Afrika iholele emhlabeni ukuthi ithumele izingane eziningi esikoleni. Ngamanye amagama, ama-Afrika amaningi, amadoda, abesifazane nezingane baphila ngesithunzi nethemba.
Futhi inqubekela phambili ye-Afrika iyabonakala nasezikhungweni ezisilethela ndawonye namuhla. Ngenkathi ngiqala ukufika emazweni aseningizimu yeSahara njengoMongameli, ngithe i-Afrika ayidingi amadoda aqinile, kepha izikhungo eziqinile. Futhi esinye salezi zikhungo kungaba yi-African Union. Lapha ungahlangana, ngokuzibophezela okwabelwana ngesithunzi somuntu nentuthuko. Lapha, izizwe zakho ze-54 zilandela umbono ojwayelekile we-Afrika ehlanganisiwe, echumayo nenokuthula. Njengoba i-Afrika ishintsha, ngabiza umhlaba ukuthi uguqule indlela eya e-Afrika.
Abantu abaningi base-Afrika bangitshele, asifuni nje usizo, sifuna ukuhweba okuphakela inqubekela phambili. Asifuni abathengi, sifuna abahlanganyeli abasisiza sakhe amandla ethu okukhula. Asifuni isithunzi sokulutha, sifuna ukuzenzela izinqumo bese sinquma ikusasa lethu. NjengoMongameli, ngisebenzela ukuguqula ubudlelwano baseMelika ne-Afrika - ukuze sibalalele impela abangane bethu base-Afrika futhi sisebenzisane, njengabalingani abalinganayo. Futhi ngiyaziqhenya ngenqubekela phambili esiyenzile. Sikhulise ukuthunyelwa kwempahla okwenziwa e-US kulesi sifunda, okuyingxenye yezohwebo okusekela imisebenzi yama-Afrika kanye nabaseMelika. Ukusekela amandla ethu - kanye nokwesekwa kwe-bipartisan amanye amalungu avelele eCongress alapha namhlanje - i-20 yabo abakhona namuhla - ngisanda kusayina ukuvuselelwa kweminyaka engu-10 yase-Afrika Ukukhula Namathuba Wemisebenzi.
Futhi ngifuna ukubabonga bonke. Kungani bengamelani kafushane kakhulu ukuze ubabone, ngoba benzile umsebenzi omangalisayo. Sethule imizamo ebalulekile yokuqhakambisa ukuphepha kokudla kanye nempilo yomphakathi kanye nokufinyeleleka kukagesi, futhi silungiselele isizukulwane esilandelayo sabaholi base-Afrika kanye nosomabhizinisi abazosiza ukukhuphuka kwe-Afrika ekukhuphukeni amashumi eminyaka ezayo. Ngonyaka owedlule, njengoba uSihlalo abonile, ngakwemukela eduze kwaBongameli be-50 base-Afrika kanye noNdunankulu baseWashington ukuze sikwazi ukuqala Isahluko esisha sokubambisana. Futhi ngokuza kwi-African Union namhlanje, ngifuna ukubopha lokho kuzinikela. Ngikholwa ukuthi ukukhuphuka kwe-Afrika akubalulekile e-Afrika kuphela, kubalulekile emhlabeni wonke. Ngeke sikwazi ukubhekana nezinselelo zesikhathi sethu - ukuvikela umnotho oqinile womhlaba phansi ngokweqile ngobudlova, ukulwa nokushintsha kwesimo sezulu, ukuqeda indlala nobuphofu obedlulele - ngaphandle kwamazwi iminikelo yezigidigidi zama-Afrika.
Manje, noma ngentuthuko emangazayo yase-Afrika, kufanele sikubone ukuthi iningi lalezi zinzuzo lisisekelo esintekenteke. Kanye nomcebo omusha, amakhulu ezigidi zabantu base-Afrika basaqhubeka nobuphofu obedlulele. Ngasikhathi sinye ubuchwepheshe obusezingeni eliphakeme bokuqamba izinto, ama-Afrika amaningi agcwele imijondolo ngaphandle kukagesi noma amanzi agobhozayo - izinga lobuphofu elihlukumeza isithunzi sobuntu. Ngaphezu kwalokho, njengoba izwekazi lincane futhi likhula ngokushesha, izwe lase-Afrika emashumini eminyaka ezayo lizophindaphindeka lifike kubantu abayizigidi eziyizinkulungwane ezimbili, futhi abaningi babo bayoba abancane, ngaphansi kweminyaka engu-18 manje ngakolunye uhlangothi, lokhu kungaletha amathuba amakhulu la ma-Afrika asemancane ukusebenzisa ubuchwepheshe obusha futhi kudale ukukhula okusha kanye nezinguquko. Izazi zezomnotho zizokutshela ukuthi amazwe, izifunda, amazwekazi akhula ngokushesha ngamanani amancane abantu. Inokunqenqema futhi inenzuzo yeningi - kepha kuphela uma laba bantu abasha beqeqeshiwe. Isidingo esisodwa sibheka eMiddle East naseNyakatho ne-Afrika kuphela ukubona ukuthi inqwaba yentsha engasebenzi namazwi afakiwe angaphephetha ukungazinzi kanye nokuphazamiseka. Ngiphakamisa ukuthi umsebenzi ophuthumayo obheke kakhulu e-Afrika namuhla nakumashumi eminyaka ezayo ukudala amathuba kulesi sizukulwane esilandelayo. Futhi kuzoba umsebenzi omkhulu. I-Afrika izodinga ukukhiqiza izigidi zemisebenzi eminingi kunalena eyenzayo njengamanje. Futhi isikhathi sikhona. Izinqumo ezenziwe namuhla zizonquma i-trajectory ye-Afrika, ngakhoke umhlaba amashumi eminyaka ezayo. Futhi njengomlingani wakho nomngane wakho, ake ngiphawule izindlela eziningana esingayihlangabezana nale nselelo sindawonye.
U-Barack Obama waya ku-UA (2015)
Partager Ephathwayo Thumela
Usuke usabela "Inkulumo kaBarack Obama kuma-Afrika" Imizuzwana embalwa edlule
Uyithandile le ncwadi?
Imiphumela yamavoti / 5. Inani lamavoti
Yiba ngowokuqala ukuvota
Njengoba uthanda ...
Silandele ekuxhumaneni nomphakathi!
Thumela i-athikili yakho kusayithi
Ukushicilela i-athikili yakho kwipulatifomu yesiko yokubamba iqhaza, umane uchofoze kusithonjana senhlalo oyikhethile bese wabelana nge-athikili yakho. Ngiyabonga !!!
Novemba 20, 2019
Novemba 17, 2019
Novemba 16, 2019
imeyili Umamukeli we-imeyili
Ngokuqhubeka nokuphequlula kwakho, wamukela idiphozi yama-cookie wangaphandle okuhloswe ukukunikeza amavidiyo, izinkinobho zokwabelana, ukulayishwa kokuqukethwe kusuka kumapulatifomu omphakathi.OkFunda okwengeziwe